ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “စင်္ကာပူက ပြောင်းလဲမည့် အခိုက်အတန့်ကို စောင့်မျှော်ခြင်း”
၁၇ နှစ်သားတဲ့လားဗျာ၊ မယုံနိုင်စရာပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင် စင်္ကာပူအတွက် ဘယ်လောက်ကြာ စောင့်ရမလဲ မသိဘူး၊ ကျနော်တို့ မသေခင် မှီလောက်ပါတယ်နော့ (မြန်မာကရောဗျာ)။ ခက်တာက စင်္ကာပူရီယန်တွေ သူတို့နိုင်ငံကိုပစ်ပြီး တခြားနိုင်ငံကို ထွက်ကုန်တာပဲ၊ ဒီမှာကျန်ခဲ့တာ များသောအားဖြင့်က နိုင်ငံရေးထက် တခြားကိစ္စတွေကိုပဲ ပိုအလေးထားသလိုပဲ။ ယူအက်စ်က တန်းတူယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ စနစ်ကြီးကတော့ အားကျရုံမှတပါး ပြောစရာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ခုလေးတင် အရွေးခံလိုက်ရတဲ့ အိုဘားမားအစွမ်းအစကို အကောင်းဖက်ကချည်း မြင်ဖို့ကတော့ စောသေးတယ်ထင်တယ်။
အရမ်းကိုရဲဝံ့ပြောင်မြောက်တဲ့ singapore နိုင်ငံရဲ့
ကိုယ့်နိုင်ငံကလူငယ်တွေရဲ့ ရဲဝံ့မှု လေ့လာလိုမှု တိုးတက်လိုမှုတွေဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအောက်မှာ ကျရှုံးနေရတယ်.. ရဲဝံ့ပြတ်သားသူတွေဟာလဲနံရံလေးဘက်ကြားကိုရောက်နေရတယ်.. စလုံးဟာလဲဒီမိုကရေစီအတုနဲ့နိုင်ငံပေမယ့်တချိန်မှာဒီလိုတိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာ တစ်ဦးခြင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုယ်စီရှိလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်..
thanks for sharing ko paw. i think he's exceptional and extraordinary among tons of S'poreans who are ignorant to politics. Politics is like taboo in sg. :)
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် တွေးခေါ်တတ်သော ရေးသားချက်တွေပါပဲ။ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ ကိုပေါကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူ အစိုးရမီဒီယာတွေရေးသမျှပဲဖတ် ၊ ဘဘတွေပြောသမျှပဲ နားထောင်နေရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကောင်းကင်ဘုံရောက်နေသလား ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ရှာဖွေသုံးသပ်ပြီးရင်တော့ အစစ်အမှန် အခြေအနေကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရမှာပါ :)
အနည်းဆုံး စင်ကာပူက ၁၇နှစ်သားက ဒီလိုပြောဖို့ အခွင့်ရေး ရှိသေးတယ်.. ဒီလိုမြင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဗဟုသုတ ရှိတယ်..
မြန်မာပြည်က အုပ်ချုပ်သူတွေ ကတော့ အသိဥာဏ်ကို ပိတ်ထားတဲ့ နည်းတွေ တွင်တွင် သုံးတာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် နစ်နာ လွန်းတယ်..
မြန်မာပြည် က ကလေးတွေ ဒီအရွယ်ဆို အတတ်ကောင်းတွေ တတ်နေပြီ..
အဲလိုပြောရင် တချုိ့တွေက မကြိုက်တတ်ဘူး..
thanks for translation and send this message to us
့အဲဒိ Onlinecitizen မှာ Guest Author အနေနဲ့ ဝင်ရေးတဲ့ Dhevarajan Devadas ရဲ့identity အမှန်အတိုင်းတင်ထား တာ ကို စလုံးထောက်လှမ်းရေးက ဘာမှမလုပ်ဘဲထားတာကြည့်ရင် မြန်မာပြည်ထက်တော့နည်းနည်းလေး (မဆိုစလောက်ကလေးပေါ့) ပို ရေးခွင့်ရပုံပဲ။
ဒီ၁၇ နှစ်သားက စလုံး တစ်သောင်း မှာတစ်ယောက်တောင်ရှိပမလားပဲ။
I agree with TZA. Too early to judge. Majority of Obama supporters voted him just because he is black not his policy. His campaign was most expensive in history means he hired best political advisors. The truth is money can buy everything. In america,nothing comes free.For example, Colin powel.Obama got his vote and now Powel gets job offer.Though I voted for Obama, I don't think he is that good. But he really is good game player.In america, especially educated society you can mock Bush or McCaine but not Obama or you will be called "racist".
ဒီလောက် တင်းကြပ်ပြီး နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူ အလွန်များတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ စလုံးမှာ ၁၇ နှစ်သားလေးက ခုလို တွေးခေါ် ရေးသားနိုင်တာ ချီးကျူး၊ အံ့ဩလို့ မဆုံးနိုင်ဘူး။ သူတို့နိုင်ငံသား တော်တော်များများက ငွေကြေး (CPF,GST, ...)နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကို မကျေနပ်ကြပေမယ့် ဖာသိဖာသာ နေကြတာ များသလားလို့။
When we were doing research for my 18 years old brother for US colleges, we dug forums where Singaporean students studying in Ivy leagues. Some of those Sporean kids may be 20 or younger,
(O levels and2years in JC for A levels, or IB plus NS may make them around that 19-21 age band). I learned some unpleasant facts, on average, those Singaporean students studying in those Ivy leagues in the States write better English than my brother, who was studying at one of the most selective technological universities in Burma. I dont think my brother is above average Burmese student as he himself got admitted into one of more selective universities in the United States where less than 20% of4years college students in US can study (not inclusive of2years colleges). Another fact is that for them, UC Berkeley or UCLA are safety schools, Cornell, CMU are not schools where they can be cocky, and for them they think only of Harvard, MIT, UMich, Yale are only places where they act snobbish. For us, to get into UCLA or Cornell is much more than an accomplishment. So we areaclass apart.
We can blame the wealth. Singaporean parents can downgrade5rooms HDB oracondo to educate one or two kids in the public universities in the US if their kids are able and smart or at least sent to universities in down under if their kids are less academically able and they can afford less and if their kids cannot get into local universities NUS and NTU. ForaBurmese parents, to send to cheaper Ausi universities will cost an arm and leg and to send to US universities will costafortune and life savings. But the real differentiating factor is the ambition and ability. I am sure we havealot of young Burmese in Ivies and public Ivies or elite Institute of Technologies but compared toa4M populated island, 50 Millions Burmese are under represented in those places.
The human development index of Singapore is far more higher than Burma.
No wonder Sr. Lee, Mr.Goh and Mr. Lee are doing good jobs.
(O levels and2years in JC for A levels, or IB plus NS may make them around that 19-21 age band). I learned some unpleasant facts, on average, those Singaporean students studying in those Ivy leagues in the States write better English than my brother, who was studying at one of the most selective technological universities in Burma. I think my brother is above average Burmese student as he was admitted at one of more selective universities in the United States where less than 20% of4years college students in US can study (not inclusive of2years colleges).
Another fact is that for ambitious Singaporean youth, UC Berkeley isasafety school. Cornell, CMU are not schools where they can act cocky, it seems they think only of Harvard, MIT, UMich, Yale as only places where they act snobbish. For us, to get into UCLA or Cornell is much more than an accomplishment. We areaclass apart.
We can blame the wealth. Singaporean parents can downgrade5rooms HDB oracondo to educate one or two kids in the public universities in the US if their kids are able and smart or at least sent to universities in down under if their kids are less academically able and they can afford less and if their kids cannot get into local universities NUS and NTU. ForaBurmese parents, to send to cheaper Ausi universities will cost an arm and leg and to send to US universities will costafortune and life savings.
But real differentiating factors are ambition and ability. I am sure we havealot of young Burmese in US Ivies, public Ivies such as UMich, UT Austin or elite Institute of Technologies. But compared to students from an island of 4M population, 50 Millions Burmese are under represented in those places.
The human development index of Singapore is higher than Burma.
Sr. Lee, Mr.Goh and Mr. Lee do
Whatacheap (2cents ) conclusion, Mr. Anonymous !
၁၇ နှစ်သားကရေးထားတာဆိုလို့ အံ့သြနေတာ။
စလုံးရဲ့ အနာဂတ်က ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း ခေါင်းရှောင်နေတဲ့ လူကြီးတွေရှိပေမဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ
တရားမျှတမှု မြတ်နိူးတဲ့ လူငယ်တွေတက်ကြွနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။
လူငယ်တွေ အမြင်ကျယ်လာပြီ။(ကျွန်တော်လည်း ခုမှ အသက် ၃၀ မှနားလည်တာပါ)။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့ သိတဲ့ တတ်တဲ့ လူငယ်တွေကို လေးစားမိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။
သူတို့ အတွက် ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာအရေးစိတ်မဝင်းစားတဲ့ စလုံးရောက်မြန်မာတွေ ကိုကြီး ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ (၁၇)နှစ်ကလေးစာကို ဖတ်မိပါစေလို့ ။
btw, kp, do u know TOC is alsoaPAP link website?
ဒီပို့စ်ကို စိတ်ဝင်တစားလာရောက်ဖတ်ရှုရင်း မှတ်ချက်တွေပေးသွားကြတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူဟာ ဒီမိုကရေစီအတုအယောင်ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မယှဉ်သာအောင် သာလွန်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။
ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း စင်္ကာပူအနေအထားက မြန်မာပြည် လက်ရှိအနေအထားထက် သာပါသေးတယ်။
သို့သော်….. ကျနော်တို့ဟာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို နှိုင်းယှဉ်ရာမှာသော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အရာမဆို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံး အမြင့်ဆုံးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှသာ သင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။ ဖွတ်ကျားနဲ့ နှိုင်းပြီး ကျေနပ်ဂုဏ်ယူနေမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့လည်း မိမိထက် အခြေအနေဆိုးတဲ့ ဇင်ဘာဘွေတို့ ရ၀မ်ဒါတို့ စတဲ့ နေရာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး လက်ရှိအနေအထားကို ကျေနပ်နေလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
တီအိုစီဟာ ပီအေပီအစိုးရ၀က်ဘ်ဆိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့က Soft Line သမားတွေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာတော့ တခါတလေ ကျနော်နှစ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးမျိုးလေးတွေတွေ့ရင် စထရိတ်စ်တိုင်းမ်းစ်သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ရင်လည်း ဘာသာပြန်မိမှာပါ။
အမှန်ကတော့ ကျနော်ဘာသာပြန်ရတာကို ၀ါသနာမပါ ပါဘူး။ ကျနော်က ဝေါဟာရသိပ်မကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ရော၊ ဘာသာပြန်တာမပြေပြစ်တဲ့အတွက်ရော ဘာသာပြန်တဲ့အခါ တချို့နေရာမှာ ထောင့်နေတာကို ကိုယ့်ဘာသာ သတိထားမိပါတယ်။
သို့သော် (ကျနော်အပါအ၀င်) မြန်မာအများစုက အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ဘို့ သိပ်စိတ်မရှည်တတ်ကြတဲ့အတွက် ကျနော်က ကျနော်ကြိုက်တဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကို ရည်ရွယ်ချက်တခုနဲ့ မျှဝေလိုတဲ့အခါ တတ်သရွေ့မှတ်သရွေ့နဲ့ ဘာသာပြန်ရုံမှတပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိပြီ ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့ခင်ဗျာ။ တချို့ဘာသာပြန်ဘို့ အချိန်မရတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ ဘေးက ကော်လံမှာဘဲ အညွှန်းအနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်အင်တာနက်မှာ လိုက်ဖတ်မိသလောက်….. လေးလေးနက်နက်နဲ့ စနစ်တကျ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ရေးတာမျိုးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးတဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ အများစုတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် စင်္ကာပူက Yawningbread မှာ အဲသည်လို ဆောင်းပါးတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရေးသားမှုမျိုးကို မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးတဲ့ဘလော့ဂ်တွေမှာ တွေ့ရခဲတယ်။ တခါတရံတော့ တချို့သောဘလော့ဂ်တွေမှာ ရှားရှားပါးပါး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ကိုအောင်သူငြိမ်းတို့လည်း ရေးတတ်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အဲသည်မျိုး မရေးတတ်ပေမယ့် မြန်မာလူမျိုးထဲက ရေးတတ်တဲ့လူတွေကို အဲသည်လိုဆောင်းပါးမျိုးတွေ များများရေးစေချင်တာဘဲ။
u dont noe much abt sg politic yet.. im quite surprised...